Qaab-Dhismeedkii Qurbajoogtii Hadhaaga Ubo Oo Isku Jaha-wareersan Kadib Markii Ay Saxada Soo Galeen Waftigii Madaxwaynaha DDSI. - Cakaara News
Qaab-Dhismeedkii Qurbajoogtii Hadhaaga Ubo Oo Isku Jaha-wareersan Kadib Markii Ay Saxada Soo Galeen Waftigii Madaxwaynaha DDSI.
Minneapolis(CN) Isniin.Maarso.23.2015, Warka naga soo gaadhaya Caasimada Minneapolis ee Cariga Maraykanka ayaa sheegaya in ay isku jaha wareereen hadhaagii hogaamin isku sheegta xubnaha Ubo ee gabaadka ku ahaa Qurbaha.
Xogaha dhabta ah ee kasoo baxaya qaab dhismeedkii xubnaha hadhaaga Ubo ayaa xaqiijinaya in ay xubnahaasi isku jahawareereen laga bilaabo taniyo maalintii ay waftiga madaxwaynaha DDSI cagta soo galiyeen cariga maraykanka halkaas oo ay shaqsiyaad hadhaaga Ubo ah ku gaban jireen.
Wareerkan ayaa xubnahaasi ku dhexmartay is-eedayn iyo calaacal gaar ahaan markii ay galabta arkeen cashirka caano kadhan ee ay diyaarsadeen ururada kala duwan ee dhalinyarada rajmantiga 31 aad iyo guud ahaanba shirarka waftiga ee ay boqolaalka qurabjoogta ahi isugu timid.
Ubo oo markii horeba gabalkeedu dhacay ayaa hadana lagu yaqaanay inay istaaga ku riyooto oo ay soo diyaarsato halgankeeda qaylada ah (Wah-Wah-da) islamarkaana dhowr xubnood ugu soo xusha qaylo dheerarka, balse waxaa cashir lama ilaawaan ah u dhigay oo xubnihii dhawaaqi lahaaba badalay jawiga iyo boqolaalka qurbajoogta ah ee sida jees jees-ka ah ugu ciyaaraya waalida iyo riyada wah-wahda ee Ubo.
Wakhtigii mudahaaraadka caano kadhan ayay sheekadii hadhaaga Ubo noqotay islaantaydii baa bukta, hadayna heblaayo iman aniguna ma imanayo, caruurtayda lasawiran mahayo, 20 sano ayaan qaylyahayay iyo hadalo isdhaafsan oo aad u jahawareriyay xubnihii hadhaaga Ubo.
Waxaana dhacaday in ay ina maygaag, caruurteedii iyo ninkeediiba ay galeen shirka waftiga DDSI iyadoo ku qososhay ina qansax oo iyadu ku adkaysanaysa halganka qaylda 20 sano ee ay ku xabeebato. Xubnahan aadka u daalay ee ay qaad qaaday hawada iyo guuxa caano kadhan ee kun jeer ku jibaarmay ayay ugu darsan tay khilaaf iyo in ay xubnaha qaar kood ayba galeen taageerada iyo cashirka caano kadhan ee DDSI.
Sidoo kale xubnahan Ubo ayaa ku marmarsoonaya caruurtiibaa naga dhaxmootee waxaan dhigi lahayn halgan qaylo oo aad u dheer iyo xabeeb farabadan ayaa kadhici lahayd. Dhanka kalena booliska iyo shacabka Minneapolis ayaa kutala bixinaya in aysan macquul ahayn in xubnahan yari ay ka agdhawaadaan boqalaalka qurbajoogta ah iyo cashirkooda caano kadhan.
Mar ay iswaydiiyeen xubnihii qaab dhismeedka ee Ina Cumar Dacay, Gaandi iyo Maadey ayay xogahani sheegayaan inuu Gaandi ugu jawaabay ina Cumar Dacay " Maxamedoow adeer google galoo cimilada eeg " iyo arimo kusaabsan dhaxanta. Maxamuud Nuur iyo Sheekeeye ayaa dhankaasna laga sheegayaa inuu yidhi ma been unbaan waligana sheegaynaa iyo maalintii waftigu yimidba waxaa labilaabay fasax iyo xanuun.
Gaandi ayaa yidhi '' Tolla'ay oo Tolla'ay caruurtayda ayaan maanta jooginee oo Afrika iga jirtee wacdaro ayay dhigi lahaayeen" waxaana lasheegay inuu Maxamuud Nuur oo aad u xanaaqsan uu kujawaabay " Anigu Professional ayaan ahay ee sidaada dukaan hilible ah kamaana furanin qaaraanka caruurta."
Hadaba waxaa maanta ku dhacday kooxdii qaylada jab wayn oo kaxidhay codkii wah-wahda ee ay labaatanka sano halganka dheer kaga jireen qurbaha.